युवतीले स्त’न कसरी आकर्षक बनाउने ? जान्नुहोस तरिका (भिडियो) - Mitho Khabar
June 20, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on युवतीले स्त’न कसरी आकर्षक बनाउने ? जान्नुहोस तरिका (भिडियो)
घरेलु उपाय गरेर स्त-नको आकारलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी तवरले बढाउन सकिएला जस्तो लाग्दैन, तर कतिपय समाजमा ठूला आकारका स्त”नलाई आकर्षक मानिने भएकाले यसलाई ठूलो बनाउन महिलामाथि दबाब हुन्छ ।सौन्दर्यसँग आकार तथा आकृति जोडिने भएकाले त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसै कारणले संसारभर नै यसलाइ बढाउन वा आकर्षक देखाउन विभिन्न विधि प्रयोग हुने गरिएको देखिन्छ ।
तपाईंले फोम भएको -ब्रा अर्थात् थुनचोली प्रयोग गर्नुभएको छ । याे कसैलाई देखाउनुपर्ने अ-ङ्ग नभै छोपेरै राख्नुपर्ने अ-ङ्ग
विभिन्न रसायनिक औषधियुक्त मल्हमको प्रयोग अर्को उपाय हो । त्यसबाहेक यसको आकारमा वृद्धि गर्न पम्पको प्रयोग पनि निकै चर्चामा छ । शल्य चिकित्सा गरेर यसको आकार बढाउन सकिन्छ ।तर अत्यधिक खर्चका साथै शल्य चिकित्साको कु-प्रभावको असर खप्नुपर्ने हुनसक्छ । तपाईंले फोम भएको -ब्रा अर्थात् थुनचोली प्रयोग गर्नुभएको छ । याे कसैलाई देखाउनुपर्ने अ-ङ्ग नभै छोपेरै राख्नुपर्ने अ-ङ्ग हो ।
कपडा कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्ने वा स्त-नलाई माथितिर उ-चाल्ने साधनहरूले आकर्षण थप्छ । महिलाहरुले आफुलाई स्वस्थ र फिट राख्नको लागि निकै मेहनतयसलाई आकर्षक देखाउने अन्य उपाय जस्तै थुनचोली ब्राभित्र कपडा कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्ने वा स्त-नलाई माथितिर उचाल्ने साधनहरूले आकर्षण थप्छ । महिलाहरुले आफुलाई स्वस्थ र फिट राख्नको लागि निकै मेहनत गर्छन । तर आफ्नो स्त”नलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्नेमा अनभिज्ञ नै छन् र खासै केहि पनि गरेको देखिदैन ।
स्तन मसाजमात्रै यौ”न सामथ्र्यको लागि मात्र नभएर विभिन्न स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने अध्यनबाट खुल्न आएको छ । जब महिलाहरुले कसिलो लुगा विशेषगरी -ब्रा लगाउँछन तब ब्रेस्टमा लिम्फैटिक फ्लुइडको काममा रोकावट आउँछ । जसले गर्दा ब्रेस्ट र अन्डर आम्र्समा भएको लिम्फ वा लसीका फ्लुइडलाई फेरी स्टिम्युलेट गर्नका लागि मसाज गर्नु आवश्यक छ । कहिलेकाहीं स्त”नमा गाँठो बन्न जान्छ यो आफैलाई थाहा हुँदैन ।